Somaliland iyo Taiwan oo shaaciyay xiriirkooda cusub | Keydmedia
Somaliland iyo Taiwan oo shaaciyay xiriirkooda cusub
Shaacinta xiriirka labada maamul aan wali helin aqoonsi ayaa kusoo beegmaya xili maanta Soomaaliya xuseyso 6-sano guuradii kasoo wareegtay markii ay Koonfurta heshay madaxbanaani, sidoo kalena la midowday Waqooyiga.
HARGEYSA, Soomaaliya - Maamulka Somaliland oo ku dhawaad 30 sano aqoonsi caalami ah raadinayay, ayaa heshiis la galay Taiwan oo ah maamul lamid ah oo Shiinaha katirsan, waxaana labada dhinac u billowday xiriir dhinaca diblumaasiyadda.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Yaasiin Faratoon iyo wafdi uu hoggaaminayo oo dhawaan booqday Taiwan, ayaa la kulmay dhigiisa, oo ay kawada hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan xoojinta xiriirka iyo is-dhexgalka shacabka labada dhinac.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Taiwan ayaa sheegtay in ay xafiis ka furaneyso Hargeysa, sidoo kalena usoo diri doonto wakiil u qaabilsan arrimaha xiriirka Somaliland. Tani waxay qeyb ka tahay dedaallada ay Taiwan ku dooneyso in ay xoojiso cilaaqaadkeeda Bariga Africa.
"Waxaan la saxiixanay Somaliland heshiis si aan u yagleelno xiriir wanaagsan. Xafiis wakiil inoo joogi doono baan ka furanaynaa Hargeysa. Waxaan masaafo ahaan isu jirnaa kumanaan Mayl, laakiin waxaan wadaagnaa jacayl qoto dheer, oo ku saabsan xoriyadda iyo dimuqraadiyadda," ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Taiwan, Joseph Wu.
Taiwan ayaa ku dhawaaqday inay ka go’day Shiinaha wixii ka dambeeyay dagaalkii 2aad ee Adduunka 1945, waxaana dadka ku nool lagu qiyaasaa 23 Milyan, halka Somaliland oo sheeganaysay tan iyo 1991 madaxbanaani ay dadkeedu gaarayaan inta u dhaxeysa 3 illaa 4 milyan.
Shaacinta Xiriirka labadan maamul, ayaa ku soo aadayo xilli maanta loo dabaal degayo sanad-guuradii 60-aad ee ka soo wareegatay xornimadii Gobollada Koonfurta Soomaaliya, ee gumeystihii Talyaaniga iyo midowgii Koofur iyo Waqooyi.